Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. देउसी-भैलोमा समेत विकृती भित्रियो – Emountain TV
कैलाली, २२ कात्तिक । पछिल्लो समय नेपालका कतिपय संस्कृति बिस्तारै हराउन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै जानु एवं परम्परागत संस्कृति संरक्षणमा हामी नेपालीले ध्यान नदिनु नै हो । यसको उदाहरणका रुपमा तिहारमा खेलिने देउसी–भैलोलाई लिन सकिन्छ ।
तिहारलाई नेपाली मौलिक संस्कृति झल्काउने पर्व मानिन्छ । झिलिमिली पर्वका रूपमा परिचित तिहारको रमाइलो पक्ष देउसी र भैलो पनि हो तर, अहिले आएर देउसी र भैलोमा विकृति देखिन थालेको छ ।
समूहमा मिलेर गाइने गीत हो— देउसी र भैलो । यसमा एक जना भट्याउने हुन्छ भने समूहका अन्य साथीहरूले देउसी अथवा भैलो भनेर भट्याउनेलाई साथ दिन्छन् । खासगरी देउसी–भैलोमार्फत देउसी खेल्न गएको घरमा उक्त घरको वर्णन गर्दै आउनुको कारण खुलाएर आशिष दिने चलन छ ।
घरधनीले पनि त्यस्ता समूहलाई आफ्नो गच्छेअनुसार फलफूल, रोटी, दक्षिणा आदि दिन्छन्, तर, हिजोआज देउसी–भैलोको नाममा विकृति–विसंगति ह्वात्तै बढेको छ । आफूले भने जति पैसा नदिए झगडा तथा तोडफोड समेत हुन थालेको छ । जसले धेरै पैसा दिन सक्छ, उसको घरमा मात्र जाने चलन पनि बढ्दो छ ।
मदिरा सेवन गरी देउसी भैलो खेल्ने तथा समूह–समूहबीच हुने झगडामा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । पहिले–पहिले यमपञ्चकको पाँच दिनमध्ये पछिल्ला ३ दिन देउसी भैलो खेलिन्थ्यो ।
तर, आज भोली तिहार सुरु हुनु अगावैदेखि पछिसम्म पनि देउसी भैलो खेल्न थालिएको छ । त्यो पनि संस्कृति संरक्षणको नाउँमा पैसा कमाउने धन्दा भएको सर्वसाधरणको गुनासो छ।
कतिपय संघ–संस्था एवं समूहले त पार्टी प्यालेसमा देउसी भैलोको आयोजना गरेर तिहारको परम्परामाथि नै चोट पुराउनेसम्मको गतिविधि गर्ने गरेका छन् । तिहारका अवसरमा खेलिने देउसी–भैलोले नेपाली संस्कृतिमा विशेष महत्व राख्छ ।
पहिले–पहिले देउसी खेल्दा परम्परागत भेषभूषा दौरा–सुरुवाल, गुन्यू–चोली लगाइन्थ्यो तर हिजोआजको देउसी भैलोमा यस्ता पहिरन देखिंदैनन् । दाजुभाइ र दिदी–बहिनीबीचको मिलनको पर्वका रूपमा लिइने यो पर्वमा मादल खैजडी मुजुरा आदि परम्परागत बाजा बजाई देउसी भैलो खेल्ने परम्परा रहेकोमा आजभोलि हिन्दी तथा अंग्रेजी गीतको बाहुल्यता देखिन थालेको छ ।
संस्कृति संरक्षणको नाममा देउसी–भैलो खेल्ने बताउनेहरूले समेत परम्परागत शैलीलाई अपनाउन सकेका छैनन् । त्यसो त देउसी भैलोमार्फत परम्परागत संस्कृति जोगाउन केही समूह लाग्दै नलागेका भने होइनन् । यस्ता कतिपय समूहले स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ समेत देउसी भैलोको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेका छन् ।